Miyaan aadaa kulliyadda? 10 Siyaabood oo lagu ogaanayo haddii kulliyaddu adiga kuu tahay
Bogga ugu weyn Ma inaan aadaa Kuleej? 10 Dariiqo Oo Lagu Ogaado In Kulliyadu Adiga Ay Tahay
Ma inaan aadaa Kuleej? 10 Dariiqo Oo Lagu Ogaado In Kulliyadu Adiga Ay Tahay
Isha sawirka: www.usnews.com
Iyada oo dhammaan farxadda iyo xamaasadda ka -qalin -jabinta dugsiga sare, waxaad dareemi kartaa cabsi iyo walaac badan.
Haa, ugu dambeyntii waxaad ku qalinjabisay shahaado la yaab leh, qof walbana waa kuu xidid. Iyo sida mid kasta oo macquul ah oo ka qalin jabiyay dugsiga sare waxaad ka fekereysaa inaad aado kulliyad.
Si kastaba ha ahaatee, dhowr su'aalood ayaa soo baxaya:
Miyaan aadaa kulliyad? Maxaan u tagaa? Ma u qalantaa?
Su’aalahan oo u muuqda kuwo xasaasi ah ayaa u baahan in la siiyo jawaabo wanaagsan oo waxqabad leh marxaladdan si looga fogaado qoomamaynta mustaqbalka.
Si aad uga jawaabto su'aalahan, waxaad u baahan tahay inaad ogaato qofka dhabta ah ee aad tahay, waxa adiga kuu shaqeeya, iyo waxa yoolkaagu yahay.
Ku guuldareysiga inaad si taxaddar leh oo sax ah uga jawaabto su'aalahan, waxaad ku biiri kartaa kooxaha burcad -badeednimada shaqo -laaweyaasha ee bilaa camalka ah oo hadda ku dhex mushaaxaya waddada.
Ka soo horjeedda waxa dad badani aaminsan yihiin, kuleejka maahan qof walba. Mararka qaarkoodna cadaadisyada ka yimaada waalidiinta, asaagga, ama la -taliyayaasha dugsiga ayaa ka dhigi kara ka -gudubka marxaladdan xoogaa adag.
Haddii aad weli halkaa joogto oo aad isweydiiso su'aalo ku saabsan kulliyad aad dhigato, ha welwelin, waan ku daboolnay.
Maqaalkan, waxaan ku wadaagi doonnaa 10 siyaabood oo wax -ku -ool ah oo kaa caawin kara xallinta halxiraalaha oo aad uga jawaabto dhammaan su'aalahaaga si wax ku ool ah.
Aan dhex galno.
Ma mudan tahay in kulliyad la aado?
Haa, tagitaanka kulliyadda waa u qalantaa. Haddii aad raadineyso inaad xiriir joogto ah la yeelatid dadka isku xirfadda iyo xiisaha leh. Waa hab weyn oo lagu gaari karo hadafkaas.
Tagitaanka kuleejku wuxuu furaa maskaxdaada, wuxuu kaa caawinayaa inaad ku abuurto kalsooni kartidaada, wuxuuna ku siinayaa shaqo fiican.
Miyaanay Ok ahayn in aan aado kulliyad?
In kasta oo ay jiraan faa'iidooyin badan oo kala duwan oo ku lifaaqan tegitaanka kulliyadda, haddana waxaa jira duruufo gaar ah oo laga yaabo inaysan adiga kugu habboonayn.
Tusaale ahaan, haddii xirfadda aad dooratay aysan u baahnayn shahaadada bachelorka, waxay u badan tahay inay waqti lumis tahay inaad bilowdo raacitaanka mid.
Qof u hanqal taagaya inuu noqdo naqshadeeye naqshadeeye, qoraa madaxbannaan, ama horumariyaha webka ayaa iska qori kara dhowr tababar iyo koorsooyin oo weli noqon kara mid ka aqoon badan kana fiican qalin -jabiyaha kulliyadda.
Wuxuu aadi doonaa kuleej qiimihiisu yahay 2022
Haa, tagista kulliyadda weli waa u qalantaa dad badanna weli waxay u soo qulqulayaan si ay maalin walba uga qaataan shahaadooyinka bachelor -ka dugsiyada kala duwan.
Waxay kaa caawineysaa inaad dhisto awoodaha hal abuurka, xirfadaha xalinta dhibaatooyinka, iyo xirfadaha kale ee loo baahan yahay ee shaqaaleynta.
In kasta oo xirfad kasta aysan u baahnayn kuleejka muddo afar sano ah, haddana shaqooyinka u baahan shahaadooyinka waxay la yimaadaan faa'iidooyin sida dakhli sare, jadwalka shaqada dabacsan, caymiska caafimaadka, hawlgabka gaarka ah, daaweynta duugista, la -talin nafsaani oo lacag la’aan ah, iwm.
Akhri: Waa Kuwee Kuwa Ka Qalin -jabiya Kuleejka Ugu Lacagta Badan? | Xirfadaha Sare iyo Dugsiyada Sanadka 2022
Sideen ku ogaadaa haddii kulliyaddu aniga ila habboon tahay?
Waxaa jira su'aalo badan oo aad rabto inaad isweydiiso si aad u ogaato haddii aad ku sii socotid afar sano oo dheeraad ah kulliyadda ayaa mudan. Dhowr tilmaamood waxaa ka mid ah inaad isweydiiso su'aalo sida:
Wali ma hayaa shaqo aan doortay?
Mihnadayda aan doortay ma u baahan tahay in aan aado kulliyad?
Ma awoodaa inaan bixiyo shahaadada?
Ma la qabsan karaa?
Kajawaabida su’aalahan ayaa kugu ridi doonta wadada saxda ah waxayna ku siineysaa jiheyn cad oo ku saabsan waxaad rabto.
Aynu nidhaahno jawaabtaada su'aasha ah "Miyaan hayaa xirfad aan doortay weli" waa Maya, waxaad u baahan doontaa inaad qaadato waqti dheeri ah si aad u ogaato xiisahaaga ama danahaaga oo aad u dooratid mihnad jidkaas ka hor intaadan go'aansan dugsiga.
Maxaan u aadaa kulliyadda?
Aadista kulliyadda waxay kaa caawineysaa inaad hesho waayo -aragnimo qiimo leh xirfadda aad dooratay, inaad xiriir la sameysato dad isku heer ah, waxayna ku siinaysaa fursado nololeed oo wanaagsan. Si kale haddii loo dhigo, waa in aad kulliyadda u aaddaa:
Ka hel aqoonta shaqada aad dooratay.
Xooji garaadkaaga caadifadeed iyo kan aqooneed.
Dhis kalsooni iyo masuuliyad.
Horumarinta xirfadaha shaqaalaynta, iwm.
10 siyaabood oo aad ku ogaan karto inaad u baahan tahay inaad jaamacad gasho
Haddaba, aynu dhex galno sababta aad halkan u joogto. Tilmaamahani waxay ku siinayaan aragti cad oo ku saabsan su'aasha "miyaan aadaa kulliyad?"
1. Ujeedooyinka socdaalka
Daraasad uu sameeyay Degree Query waxay ogaadeen in ku dhawaad ​​30% ardayda adduunka oo dhan ay u malaynayaan inay tahay inay dhigtaan kulliyadda dugsiga sare kadib.
Laakiin, taasi run ma tahay?
Waan ogahay in lagugu quudiyey qaar badan oo ka mid ah erayadii hore. Kuleejka aad. Qaado shahaado. Shaqo hel. Sax?
Si kastaba ha ahaatee, aadista kulliyadda adiga oo aan lahayn qeexitaan cad oo ah waxa aad samaynayso waxay ku dhowdahay dammaanad qaad inaad ku guul darraysato. Waa inaad leedahay hadafyo horay loo go'aamiyey oo aad raadineyso inaad gaarto ka hor intaadan xitaa bilaabin safarka.
Baadh sababahaaga aad u aadi lahayd kulliyadda.
Runtii ma u qalantaa?
Runtii ma u baahan tahay inaad dhigato kulliyad?
Miyaad hubtaa inaadan u socon maxaa yeelay saaxiibkaa ayaa u malaynaya inay tahay fikrad wanaagsan?
2. Himilooyinkaaga shaqo
Ogaanshaha hadafyada nolosha ayaa laga yaabaa inay aad u adag tahay. Gaar ahaan marka ay ku saabsan tahay doorashadaada xirfadeed, runtii way adkaan kartaa in la ogaado waxaad rabto inaad sameyso mustaqbalka.
Si kastaba ha noqotee, aqoonsiga doorashadan ayaa muhiim u ah ka jawaabidda su'aalaha sida…
Miyaan bartaa Sharciga ama Fiisigiska?
Miyaan u baahanahay inaan tago gabi ahaanba?
Tusaale ahaan, haddii yoolkaagu yahay inaad noqoto injineer kiimikaad, waxaad u baahan doontaa inaad hesho shahaado si aad u horumariso xirfado lagu shaqayn karo. Dhanka kale, haddii aad rabto inaad noqoto sawir qaade, waxaad aadi kartaa dugsi ganacsi ama waxaad iska qori kartaa koorso si aad u barato xirfadahan oo kale.
3. Hadafyadaas ma u gaari kartaa si aan ahayn dhaqankii hore?
Iyadoo dhowr xirfadood ay u baahan yihiin heerar gaar ah oo shahaadooyin iyo barnaamijyo shahaado ah, qaar kale ayaa u baahan maalgashi yar oo tababar ah marka loo eego barnaamijka kuleejka dhaqameed.
Tusaale ahaan, haddii aad raadinayso inaad noqoto dhakhtarka indhaha, uma baahnid inaad soo gasho tababar afar sano ah oo kulliyad ah. Taa baddalkeeda, naftaada geli tababaro shaqo oo kala duwan si aad u hesho shahaadada loo baahan yahay.
4. Ogow waxa adiga kuu fiican
Waxaa jira dhowr siyaabood oo aad ugu booddo xirfaddaada adigoon aadin kulliyad.
Kulliyaddu waxay noloshaada hakinaysaa afar sano. Wakhtiganna waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad sahamiso hiwaayadahaaga sababtoo ah dhowr xeerar dugsi.
In kasta oo tani ay dadka qaar ka caawiso inay si tartiib tartiib ah uga gudbaan inay da'yar noqdaan oo ay qaan -gaaraan, kuwa kale, waxay u ekaan kartaa mid dheer. Si kale haddii loo dhigo, soo ogow waxa adiga kuu fiican oo ku dheg.
5. Kharashka aadista kulliyadda
Qiimaha guud waa hal arin oo aad rabto in aad ka fikirto in ay kaa caawiso gunaanadka haddii ay run ahaantii u qalanto.
Sida laga soo xigtay Xarunta Qaranka ee Tirakoobka Waxbarashada, celceliska kharashka kuleejka aadi waa ku dhawaad ​​$ 100,000.
Haddii aadan awoodi karin bixinta lacagtan oo aadan jeclayn inaad qaadato deyn arday, waxaad ka fiirsan kartaa sahaminta dookhyo kale.
Akhri: Intee in le'eg ayay tahay in Ardayga Kulliyadda lagu soo oogo Tababar 2022 -ka?
6. Hadafyada maaliyadeed
Waa maxay dakhligaaga sanadlaha ah ee la filayo?
In kasta oo ardayda ka qalin jabisa kulliyadda ay u badan tahay inay kasbadaan wax ka badan dadka haysta dibloomada dugsiga sare, xirfadaha qaarkood waxay kaa siiyaan wax ka sarreeya kuwa qalin jabiya.
Hadda, ardaydii ka qalin jabisay kulliyadda kasbado inta u dhaxaysa $ 3000 - $ 4500 bishii, sidaa darteed, haddii aad eegayso inaad hesho ku dhawaad ​​$10,000 bishii, waxaa laga yaabaa inaad bilowdo ganacsi ama aad barato xirfado lacag-bixineed sare leh sida coding-ka iyo kobcinta software-ka ama xisaabinta daruuraha.
7. Isku qoro shahaadada 2 sano ee kulliyadda beesha
Haddi aanad wali is weydiinin "miyaan aadaa kulliyad," waxaa laga yaabaa inaad iska diwaangeliso shahaado 2 sano ah dugsiga beesha.
Ma lihid wax aad lumiso.
Haddii aad dareento inaad jeceshahay inaad aado kulliyad, waayo-aragnimadaada dugsiyada bulshadu waxay kaa caawinaysaa inaad si dhakhso leh ula qabsato wakhtiga.
8. Xiisaha tacliinta
Qof kastaa ma fadhiisan karo muxaadarooyinka, ma sameyn karo tijaabooyin shaybaar, ama inuu ku fiicnaado kuleejka.
Miyaad xiisaynaysaa waxbarashada dugsiga?
Ma jeceshahay xilliyada imtixaanka?
Haddii aadan hubin waxaad rabto inaad sameyso, kani waa tilmaame wanaagsan oo kaa caawinaya inaad go'aansato haddii aad weli sii soconayso.
Raadi waxaad si dabiici ah ugu fiican tahay oo ku dheg, Muddo!
Akhri: Top 10 Kulliyadood oo leh Qalinjabinta ugu Mushaharka badan Dunida | 2022
9. Qaado sanad farqi ah
In erayada Andrew J. Martin:
“Arday badan, sannadka farqiga u dhexeeya wuxuu ku saabsan yahay in la caddeeyo go'aankooda; horumarinta xirfadaha is-xakamaynta, ballaarinta kartidooda iyo is-abaabulka. ”
Haddii aad weli ku wareersan tahay xirfadda aad dooratay, qaadashada sannadka farqiga ah waxay noqon kartaa wax macquul ah in la sameeyo.
Tani waa hab wanaagsan oo lagu barto waxyaabo cusub, loo sameeyo waxaad jeceshahay, oo naftaada si fiican loo fahmo. Warbixin ka timid Ururka Gap Year Association ayaa lagu ogaaday in 96% ardeyda qaatay sanad kala-duwanaansho ay kordhiyeen isku-kalsoonidooda iyo bisaylkooda.
10. Raadso hagid xirfadeed
Iyadoo waalidkaa ama la-taliyeyaasha dugsigu ay ku siin karaan talo dhab ah oo wax-ku-ool ah oo ku saabsan waxa la sameeyo ka dib dugsiga sare, waxaa laga yaabaa inaanay haysan waayo-aragnimada loo baahan yahay si ay kaaga caawiyaan inaad gaarto go'aamo xog ogaal ah.
Markaa waxaa fiican inaad la tashato khabiir waxbarasho si uu kaaga caawiyo inaad falanqayso danahaaga iyo yoolalkaaga.
Ma inaan tagaa kulleejooyinka la isweydiiyo?
Miyaan marka hore aadaa kulliyadda bulshada?
Haddii aadan hubin waxaad doonayso inaad samayso ama aad ku dhegan tahay xulashada dariiqaaga xirfadeed, markaa waxaa laga yaabaa inay aad u xikmad badan tahay inaad marka hore iska qorto kulliyadda beesha ee maxalliga ah si aad u hesho khibrad aad ugu sheegto go'aankaaga aad ku aaddo kulliyadda .
Miyaad aadi kartaa kulliyadda da'da 16?
In kasta oo kulliyadaha Maraykanka ay aqbalaan ardayda da'doodu tahay 17 ama ka kor, haddana waxaa jira waxyaabo ka reeban xeerkan.
Haddii aad la kulanto dhammaan kulliyadda aad dooratay, waxay ku xisaabtami karaan inay ku siiyaan oggolaanshaha.
Miyaan aadaa kulliyadda haddaanan garanayn waxaan doonayo inaan sameeyo?
Ha aadin kulliyadda si aad naftaada u hesho ama waxaa laga yaabaa inaad ku dambayso deyn arday oo la yaab leh. Haddii aadan hubin hadafyadaada ama xirfaddaada, waxaad tixgelin kartaa inaad qaadato sannadka farqiga ah, iska diiwaangelinta kulliyadda bulshada, ama xirfadda ka barato dugsiga ganacsiga.
Miyaan tagaa kulliyad ama jaamacad?
Kulliyaddu sida caadiga ah waxay bixisaa shahaadooyinka qalin -jabinta oo keliya halka jaamacaddu ay bixiso labadaba qalin -jabiyayaal iyo shahaadooyin hoose.
Sidoo kale, jaamacaddu waxay bixisaa barnaamijyo iyo casharo kala duwan.
Markaa haddii aad raadineyso inaad dhigato dugsi aad ka baari karto barnaamijyo kala duwan, markaa aaditaanka jaamacadda ayaa kugu habboon.
Haddii aad qiimeyso dhisidda xiriir hal-hal ah oo aad la yeelato macallimiintaada iyo ardayda kale, markaa waa inaad aaddaa kulliyadda.
Ma khasab baa inaad kulliyad aado si aad u guulaysato?
Jawaabta oo kooban ayaa ah MAYA. Arday badan oo ka qalin jabiyay kulliyado ayaa maanta shaqo la’aan ah inkastoo ay waxbarteen. Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad samayso si aad maanta u guulaysato waa inaad naftaada hesho. Marka xigta, sahamiso habab kala duwan si aad naftaada u dhisto oo aad ugu dhaqaaqdo yoolalkaaga.
Xulashada aad u aadi doonto kulliyadda gebi ahaanba adiga ayay kugu xiran tahay waana inaan lagu khasbin. Waqtigaaga qaado si aad u eegto xaaladdaada hadda, qoyskaaga, ama wax kasta oo kale oo ay ku yiraahdeen qoraalkan waxaana kuu fududaan doonta inaad ka jawaabto su'aasha ah "haddii aan aado kulliyad."
Weydii ciyaaryahan kasta oo kubbadda koleyga ah, tababare ama xiisee kubbadda koleyga kan ugu mushaarka badan ciyaaryahan NBA waxaana laga yaabaa inaad hesho…
Xirfadda iibintu waxay noqon kartaa mid aad u macaash badan, iyada oo fursad u leh inay safraan oo ay la kulmaan dad cusub maalin kasta.…
Sida isboorti kasta oo kale, guusha ama guuldarrada kooxda kubbadda koleyga ee kulliyadda waxay ku xiran tahay tayada…